Ziziphi Amandla eNkongolo?
Isiqendu I, Isiqendu 8, soMthetho-siseko we-US, sichaza "ukuchazwa" okanye "ukubala" kwamandla eCongress . Amagunya athile abumba isiseko seMerika " yokubambisana ," ukwahlula kunye nokwabelana kwamagunya phakathi koorhulumente ophakathi kunye noorhulumente karhulumente.
Amagunya eCongress anqunyelwe kulabo bachazwe kwiCandelo le-1, iCandelo 8 kunye nalabo abazimisele ukuba "kuyimfuneko nefanelekileyo" ukufeza loo magunya.
Igatya elibizwa ngokuba "liyimfuneko kwaye lifanelekileyo" okanye "li-elastic" igatya lenza isigqibo sokuba iNkongoma isebenzise " amandla amaninzi ," njengendlela yokuhamba kwemithetho elawula iimpahla ezizimeleyo .
Onke amagunya anganikiweyo kwi-Congress ye-US yiCandelo I, iSigaba 8 sishiye kumazwe. Ukukhathazeka ukuba le miqathango emagunyeni karhulumente kaRhulumente angabonakali ngokucacileyo kuMgaqo-siseko wokuqala, i-First Congress yamukela iSilungiso seshumi , esichaza ngokucacileyo ukuba onke amagunya anganikiweyo kurhulumente wephondo ayagcinwa kumazwe okanye kubantu.
Mhlawumbi amagosa angundoqo abonelelwe kwiNgqungquthela yiCandelo I, iCandelo 8 yilezo zenze iirhafu, iintlawulo kunye neminye imithombo yemali efunekayo ukugcina imisebenzi kunye neenkqubo zorhulumente wephondo kunye nokugunyazisa inkcitho yale mali. Ukongezelela kwamagunya okurhafu kwiSiqendu 1, iSilungiso seshumi elinesithandathu sigunyazisa iNkcazo ukuseka nokubonelela ukuqokelela irhafu yengeniso kazwelonke.
Amandla okulawula inkcitho yemali ye-federal, eyaziwa ngokuba yi "amandla ekhredithi," ibaluleke kakhulu kwinkqubo " yokuhlola nokulinganisela " ngokunika igunya elilawulayo igunya elikhulu phezu kwegatsha elilawulayo , elimele licele iCongress yonke inkxaso kunye nokuvunyelwa kwebhajethi yonyaka we-budget .
Ukudlulisa imithetho emininzi, iCongress ithatha igunya layo "kwiCandelo loRhwebi" leSiqendu I, iCandelo 8, unikezela iCongress igunya lokulawula imisebenzi yezoshishino "phakathi kwamazwe."
Kule minyaka, iCongress ithembele kwiCandelo loRhwebi ukuba lidlule imimandla, ukulawulwa kwebhamu, kunye nemithetho yokukhusela abathengi kuba iinkalo ezininzi zoshishino zifuna izinto kunye nemveliso yokuwela imigca yelizwe.
Nangona kunjalo, ububanzi bemithetho ebekwe phantsi kweCandelo loRhwebi alunamkhawulo. Ukuxhalabele ngamalungelo ale lizwe, iNkundla ePhakamileyo yase - US kwiminyaka yamuva ikhuphe umyalelo wokunciphisa igunya leCongress ukuba idlulise umthetho phantsi kwecandelo loshishino okanye amanye amagunya ngokubhekiselele kwiCandelo le-1, Icandelo 8. Ngokomzekelo, iNkundla ePhakamileyo iye yaguqula Umthetho we-Gun-Free School Zones Act ka-1990 kunye nemithetho ejoliswe ekukhuseleni abasetyhini abaxhasekileyo ngenxa yokuba izinto ezinjalo zamapolisa zendawo zimele zilawulwe yilizwe.
Umbhalo opheleleyo weCandelo I, iCandelo 8 lifundeka ngale ndlela:
Isiqendu 1 - ISebe loMthetho
Umhlathi 1: INkongolo iya kuba namandla okubeka kunye nokuqokelela Imirhumo, imisebenzi, iimpahla kunye nezikhwama, ukuhlawula iItyala kunye nokubonelela ngoKhuselo oluqhelekileyo kunye neNtlalo yeNhlalakahle yase-United States; kodwa zonke iiMisebenzi, iimpahla kunye neengxowankulu ziya kuba zifanelwe kulo lonke elaseUnited States;
Igatya 2: Ukuboleka Imali kwi-credit ye-United States;
Umhlathi wesi-3: Ukulawula uRhwebi ngeZizwe eziManye amazwe, nakwiiMerika eziliqela, kunye neentlanga zamaNdiya;
Umhlathi wesi-4: Ukumisela uMgaqo woMgaqo-nkqubo woNyaka, kunye neMithetho efanelweyo malunga nokuPhukisa kwi-United States;
Umhlathi wesi-5: Ukuhlawula imali, ukulawula ixabiso, kunye neNgxowa-mali yangaphandle, nokulungisa iMilinganiselo yeZilinganiselo kunye neMilinganiselo;
Umhlathi 6: Ukubonelela ukuhlawuliswa kobuqhetseba kwii-Securities kunye neNgxowa-mali yangoku ye-United States;
Umhlathi 7: Ukuseka iiOposti zeposi kunye neNdlela zeNdlela;
Igatya 8: Ukukhuthaza iNqubekela phambili yeSayensi kunye noBugcisa obuNcedo, ngokuqinisekisa ukuba amaxesha aQhathaniswa kubalobi kunye nabangenayo i-Right to their Writings and Discoveries;
Umhlathi 9: Ukwenza amatyala angaphantsi kweNkundla ePhakamileyo;
Umhlathi 10: Ukuchaza nokugweba iiprasi kunye namaFelon ezenziwe kwiiLwandle eziPhezulu, kunye nezoTyala ngokuchasene noMthetho weZizwe;
Umhlathi 11: Ukuvakalisa iMfazwe, ukunikezela ngeeNcwadi zeMarque kunye nokuPhepha, kwaye wenze iMithetho malunga nokuThuthwa koMhlaba kunye namanzi;
Umhlathi 12: Ukuphakamisa nokuxhasa iMikhosi, kodwa akukho Ukwabiwa kwemali kuleyo Ntlawulo kuya kuba yithuba elide kuneMibini iminyaka;
Umhlathi 13: Ukubonelela nokugcina iMavy;
Umhlathi 14: Ukwenza imiGaqo kaRhulumente kunye noMgaqo woMhlaba kunye namaQonga oPhoselo;
Umhlathi 15: Ukubonelela ngokubiza iiMidiya ukuba ziphumeze iMithetho yeManyano, zikhusele izikhuselo kwaye zibuyisele izibhamu;
Umhlathi wesi-16: Ukubonelela ukulungelelanisa, ukulwa, nokulawula, i-Militia, kunye nolawulo lolo Nxalenye yabo njengoko inokuqeshiswa kwiNkonzo ye-United States, ngokuya kwi-United States ngokulandelanayo, ukutyunjwa kwamaGosa kunye neGunya yoqeqesho lweMilitia ngokwemiqathango ebekwe yiCongress;
Umhlathi 17: Ukusebenzisa iMithetho ekhethekileyo kuzo zonke iimeko, ngaphaya kwesi Sithili (esingagqithanga i-square ye-Miles square), njengokuba, ngokutyunjwa kwamanye amazwe kunye ne-Acceptance of Congress, yiba sisihlalo soRhulumente wase-United States, kwaye ukusetyenziswa njengeGunya kuzo zonke iindawo ezithengiwe nguMvume weSigqeba sikaRhulumente apho iSame iya kuba khona, ukuKhutshwa kweeNqaba, iiMagazini, iiArsenals, ii-Yards, neeWadi kunye nezinye izakhiwo ezifunekayo; - kwaye
Umhlathi 18: Ukwenza yonke iMithetho eya kuba yimfuneko kwaye ifanelekile ekuqhubeni ekusebenziseni amandla angaphambili, kunye nawo onke Amandla anikwe nguMgaqo-siseko kuRhulumente wase-United States, okanye nakuphi na iSebe okanye iGosa lalo.
Kutheni uB Bush kunye noLincoln Bobabini baxhoma uHabeas Corpus
Iinkcukacha ezifutshane malunga noMgaqo-siseko wase-US
Umbhalo we-22 uhlengahlengiso loMgaqo-siseko wase-US
Iingxabano zokuchasana kweCawa noRhulumente
Ibhili Yasekuqaleni yamalungelo ayenezilungiso ezilishumi elinesibini
Yintoni Ibhali likaHabeya Corpus?
Toni Braxton's Ten Hits Greatest
I-Snakehead Intlanzi: I-Special Non-Natives idala iingxaki kwi-US Water
Ukudibanisa iNkokeli kunye neLed
Biography kaAndy Warhol
UArthur Miller 'UCrucible': Iprogram yeSishwankathelo
Ukubhiyozela i-Ostara, iSigino Equinox
Ubomi kunye nokufezekiswa kukaDkt Martin Luther King Jr.
Top 10 Enrique Iglesias IiVideos
I-Force Inamandla Kule Mihla yamanqaku aMnandi iMemes
Ubuntu baseRoma yaseRoma
Umkhosi weTanabata eJapan kunye neTanabata Story
Gogatsu byou - May Ukugula